व्यवसाय ठप्प छ, अहिले पिडामा भएको बेलामा कर तिर्न सकिदैन : युवा व्यवसायी योगी - Parichay Network
व्यवसाय ठप्प छ, अहिले पिडामा भएको बेलामा कर तिर्न सकिदैन : युवा व्यवसायी योगी
परिचय नेटवर्क द्वारा	 २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:१७ मा प्रकाशित
राजु गिरी, पोखरा । कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यमा लकडाउन भएको पनि साढे २ महिना बितिसक्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्नका लागि आह्वान गरेको छ । कर तिर्नु व्यवसायीको कर्तव्य भएपनि अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने वातावरण नभएको पोखराका युवा व्यवसायी रेशम योगी बताउँछन् । उनी भन्छन् –‘अहिले लकडाउनको विकल्प नखोजि नहुने अवस्थामा छौं । कि त सरकारले व्यापारीलगाएत सबैको लागि राहतको प्याकेज ल्याउनु प¥यो । व्यापार व्यवसाय बन्द छ । यहि बेला राज्यले कर तिर भनेको छ । कसरी तिर्ने कर ? पैसा भए पो कर तिर्ने नभए के तिर्ने ? व्यवसाय भनेको देशको, सरकारको मेरुदण्ड हो । शरिरको ढाड जस्तो हो । ढाड नै भाचियो भने यो सरकार कसरी चल्न सक्छ ?’
सरकारले व्यवसायीलाई विशेष राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । यो अवस्थामा व्यवसायीका धेरै ठाउँको आर्थिक समस्या उत्पन्न भैरहेको उनी बताउँछन् । करको विषयमा आक्रोस पोख्दै योगी भन्छन्– ‘सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्युले असार ७ सम्म तिर्न भन्नुभएको रहेछ । एक्कासी असार ७ भित्र कहाँबाट आउन सक्छ व्यवसायीसँग पैसा ? अर्थमन्त्रीलाई यति कुरा पनि थाहा छैन । त्यसमाथी सापट लिएर कर तिर्न भन्नु भएको छ रे । प्लीज अर्थमन्त्री ज्यु मलाई सापट हजुरले नै दिनुस् । अनि तिरौला कर । एकातर्फ लकडाउन, अर्कोतर्फ पिडामा भएका व्यवसायीलाई यस्तो निर्देशन दिने ?’
सरकार अहिले गरेको काम प्रति चित्त बुझाउने स्थिति नरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्– ‘सिमाबाट आउने हाम्रा दाजुभाई दिदिबहिनीहरुलाई सिमाक्षेत्रमै विशेष क्वारेन्टाईन व्यवस्था गरेर कोरोना नियन्त्रणमा भुमिका खेल्नु पर्छ । काम युद्धस्तरमा जानु पर्छ । यहि तरिकाले राज्यले १० वर्षमा पनि कोरोनाको चेकजाँच गरेर सक्दैन ।’
राज्यले सामान्य नागरिकको मनोभावना पनि बुझ्न नसकेको उनको बुझाई छ । सरकार जनतासँग जोडिन सक्न पर्ने उनी बताउँछन् । यवा व्यवसायी योगी बताउँछन् –‘सरकारले एकलौटी तरिकाले सफल हुन खोज्नु पतनको बाटो हो । आज विदेशमा रहेको नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी रोइरहनुभएको छ । रेमिट्यान्सबाट चलेको राज्यले यस्तो व्यवहार गर्ने ? सरकार गम्भिर हुनु जरुरी छ ।’
कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मात्र नसक्ने नेपाली जनतालाई साथमा लिएर नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । कछुवा गतिमा हिडेर, लटरपटर गरेर, ढाटछल गरेर कोरोनाको नियन्त्रण हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।